Mbola manahy ve ianao sao tsy hahita milina fanapahana mety? Tamin'ny volana Mey tamin'ity taona ity, ny orinasan-tsika jiahao dia nanamboatra milina fanapahana lasantsy vaovao, izay manana endrika endrika maoderina tsy manam-paharoa, izay mety hisy fiatraikany amin'ny fahitana anao. JH350 kapila lasantsy dia manapaka mora foana ny beton, ny vato, ny biriky, ary ny manamboatra ...
Tamin'ny 3:30 hariva tamin'ny 7 aogositra 2020, ny fivorian'ny orinasa dia nanao fihaonambe manokana momba ny vokatra lehibe tao afovoan'ny foiben'i Yongkang. Ireo orinasa avy amin'ny indostrian'ny fitaovana dia nantsoina manokana hanatrika ny fihaonambe. Nandritra ny fanomanana am-pitandremana dia naneho ny fandravana herinaratra JH-168A 2200W ...
20 Oktobra, natao tao amin'ny Yongkang International Convention and Exhibition Center ny milina Yongkang sy Hardware Expo. Ny fampirantiana dia nampiseho indrindra ny indostrian'ny fitaovana sy ny milina. Tamin'ny alalàn'ity fampirantiana ity dia nampiseho ny vokatray tamin'ny mpanjifa ny orinasanay, ary tamin'ny alàlan'ny fifandraisana an-toerana, niarahanay ...